पक्राऊ परेका अर्जुन छेत्रीको खुल्यो डरलाग्दो रहस्य !! भबिस्यबाणीको पर्दाफास हुदा चकित….(भिडीयो सहित) « Onlinetvnepal.com
पक्राऊ परेका अर्जुन छेत्रीको खुल्यो डरलाग्दो रहस्य !! भबिस्यबाणीको पर्दाफास हुदा चकित….(भिडीयो सहित)
Published :7June, 2019 5:36 am
भूकम्प आउँछ भनेर अफवाह फैलाएको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौँको गौशालाबाट आज एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीका अनुसार भोजपुरका जरायोटार घर भई काठमाडौँ सिनामङ्गल बस्ने अर्जुनकुमार थापा क्षेत्रीलाई पक्राउ गरिएको हो ।
यही जेठ २९ गतेभित्रमा भूकम्प जान्छ र प्रलय हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्दै हिँडेकाले नियन्त्रणमा लिइएको परिसरका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बताउनुभयो । उनले आफूलाई ज्योतिषी हो भन्दै विभिन्न यूट्युब च्यानलमा अन्तरवार्ता दिँदै भूकम्पको भविष्यवाणी गर्दै हिँडेको बताइएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा विपद् घटना घट्ने भनेर अफवाह फैलाइ मानिसलाई डर, त्रास देखाउने क्रियाकलाप गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैदको व्यवस्था रहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार यसरी जनतामा सन्त्रास सिर्जना गर्ने अन्य ज्योतिषी र माता जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने छ । यस्ता प्रकारका समाचारहरु सम्प्रेसन नगर्न संचारमाध्यमलाई पनि डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले अनुरोध गरेका छन ।
उनि पक्राउ परेपछि पछिल्लो समय विश्लेषकहरु पनि बोल्न थालेका छन । यसै बारे पुण्य गौतमसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस :
Exclusive: रबि निर गुहार माग्न पुगे राम कृष्ण ढकाल ! ढकालको श्रीमतीले आत्मह.त्याको प्रयास(भिडियो)
चर्चित गायक रामकृष्ण ढकाल र उनकी पत्नी निलम शाह फेरी शहकारीको झमेलामा फसेका छन ।
७ पुस्तापछि मात्रै वंशज नागरिकता ! अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई सांसदको प्रस्ताव : …….
सांसद झपट रावलले अंगीकृत नागरिकको सन्तानलाई ३ देखि ७ पुस्ता नेपालमा बसोबास गरेपछि मात्रै वंशजको
सूर्य इन्टरनेशनल अवार्ड २०१८ जापानको टोक्योमा……